Ukubalwa Kwekhadi le-Blackjack - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Blackjack » Ukubalwa Kwekhadi le-Blackjack
Ukudiliza Ikhadi Eliphezulu Lokubala Izinganekwane
Inkolelo-ze 1: Akukho emthethweni ukubala amakhadi
Inganekwane 2: Kufanele ube nengqondo ebukhali nenkumbulo yokubala amakhadi
Inganekwane 2: Kufanele ube nekhono futhi ube nolwazi kakhulu kwiMathematics
Inganekwane 3: Udinga ukuba ne-bankroll enkulu uma ufuna ukuthatha ukubalwa kwamakhadi ngokungathi sína
Inganekwane 4: Uzodinga ukutadisha ukubalwa kwamakhadi isikhathi eside ukuze kusebenze
Inganekwane 5: Abaphathi nabaphathi beCasino bazokukhipha uma ubanjwa ubala amakhadi
Inganekwane 6: Uma ubala amakhadi, uzogcina uwine njalo
Inganekwane 7: Ukubalwa kwamakhadi kunzima uma amakhasino ezosebenzisa amatafula amakhadi ayisithupha noma ayisishiyagalombili
Uyini Umphumela Ekususeni Ikhadi?
Ukususa Amakhadi ku Game of Blackjack
Ukubalwa Kwekhadi njengoba Kusetshenziswe ku-Blackjack
Kusebenza Kanjani Ukubala Amakhadi
Izinhlelo Zokubala Amakhadi Okufanele Uzazi
Izisekelo zoHlelo Lokubala Ikhadi le-Hi-Lo
Amathegi asetshenziswe ku-Hi-Lo
Nakhu ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukubalwa kwamakhadi kudecki elilodwa nakumageyimu we-Double Deck
Ongakwenza emidlalweni yedeski ephindwe kabili
Ambalwa Amagama Ngokubala Kweqiniso
Abadlali baziwa ngokudala emizameni yabo yokushaya izingqinamba futhi banqobe emdlalweni we-blackjack. Ubani ongeke athathe elinye ibanga ekulungiseleleni uma kuzoholela ekuzuzeni ngokushesha kanye ne-jackpot eshintsha impilo, akunjalo? Namuhla, abadlali bathembela kumasu athile avivinyiwe nawokudala ukushaya izingqinamba futhi baphumelele uma kuziwa ekudlaleni i-blackjack.
Futhi enye indlela edumile esetshenziswa abadlali abanolwazi ukubala amakhadi. Ngokuyinhloko okusetshenziswa emdlalweni we-blackjack, ukubalwa kwamakhadi kuyisu lokulinganisa ngezibalo uma isandla esilandelayo sithanda umdlali noma umthengisi wekhasino. Abadlali abasebenzisa lelisu babizwa njengezinto zokubala amakhadi, futhi umsebenzi wabo omkhulu ukubala nokugcina isibalo samakhadi aphansi nanenani eliphakeme abonwa ngabadlali ukunciphisa umkhawulo wendlu.
Ngenqubo yokubalwa kwamakhadi, abadlali banganciphisa ukulahlekelwa kwabo uma ukubalwa kungathandeki, noma basebenzise isimo uma becabanga ukuthi ukubala kuvuna bona. I-movie ’21’ edlale uKevin Spacey yisibonelo esisodwa esihle sokubalwa kwamakhadi okwenziwayo.
Namuhla, ukubalwa kwamakhadi kungenye yezindlela ezithandwa kakhulu ngabadlali be-blackjack. Kunezinsizakusebenza eziku-inthanethi ezisiza futhi ziqondise abadlali uma kukhulunywa ngokubalwa kwamakhadi nokwenza imidlalo. Kodwa-ke, kusenezinsumansumane ezisabalele ngaleli su.
Futhi ngenxa yale mibono eyiphutha mayelana necebo, abadlali abaningi bavame ukukuthinta ukudlala kwabadlali abaningi. Njengomdlali onolwazi ofuna ukukhulisa imiphumela yakhe, kufanele wazi zonke lezi zinganekwane bese uthola ukuthi yini eyiqiniso ngazo.
Ukubalwa kwamakhadi empeleni kungumsebenzi wengqondo. Ngakho-ke ukubalwa kwamakhadi akukaze kube semthethweni.
Yebo, udinga ukulandela umkhondo wamakhadi asetshenzwe kulo mdlalo. Kepha akusho ukuthi udinga ukubamba ngekhanda bonke ukugcina umkhondo wamathrendi. Okwenziwa yizibali zamakhadi ukunikeza umaki kumakhadi athile, njengo -1 noma +1, futhi bazomane bangeze noma basuse njengoba amakhadi athile kusetshenzelwa kuwo kubadlali. Ngamafuphi, ukubalwa kwamakhadi kudinga ukuqonda izibalo eziyisisekelo namanye amakhono wokugcina amarekhodi.
Uma ubuke u-’21 ‘, uzothethelelwa ngokusho ukuthi ukubalwa kwamakhadi kugcinelwe kuphela izinhlaka zokukhipha izinombolo, njengalabo abafunda eMIT. Ngenkathi kunesici sezibalo ekubalweni kwamakhadi, akusho ukuthi kufanele ube yingcweti kule ndaba. Inqobo nje uma ufunda ngokusebenza, ukubalwa kwamakhadi nakho kungakusebenzela.
Izibali zamakhadi zingasebenzela zonke izinhlobo zabadlali abanama-bankroll ahlukene nesabelomali. Uma une-bankroll encane, umane ubheje ngokufanele. Okubalulekile ukuthi ukwazi ukuphatha i-bankroll yakho ukuze ukwazi ukudlala isikhathi eside.
Yebo, ukuqonda ukubalwa kwamakhadi kuthatha isikhathi esithile nokuzibophezela ngaphambi kokuthi ekugcineni ubone izinzuzo zako, kepha ngeke kuthathe impilo yonke. Kukhona ezinye izinhlelo ezintsha ezitholakalayo okulula ukuzisebenzisa nokuziqonda ezingathatha kuphela amahora ambalwa ukuzazi.
Kwakunesikhathi lapho amakhasino ayeqina khona ezincwadini zamakhadi, futhi ayebuthelwa ndawonye. Lolu hlobo lokuhamba luyaqondakala ngoba opharetha bekhasino bangathanda ukuvikela izintshisekelo zabo zebhizinisi. Kepha namhlanje, lolu hlobo lokuhamba kusuka kumakhasino alusasatshwa ngenxa yabadlali abahlakaniphile abacele usizo lwabameli abangochwepheshe.
Ngalezi zingqinamba zakamuva, amakhasino manje ayaqaphela uma kukhulunywa ngokuphatha abadlali ababonwa ukuthi basebenzisa ukubalwa kwamakhadi njengecebo. Ezimweni ezimbi kakhulu, amakhasino angacela umdlali ukuthi ashiye itafula noma ashiye ikhasino.
Lokhu kuyingozi okumele wonke umdlali ayithathe lapho efuna ukuzijwayeza ukubala amakhadi. Abasebenza ngeCasino basaqhuba ibhizinisi, futhi bafuna ukuvikela izintshisekelo zabo.
Ngokwesiko elidumile, okokubala kwamakhadi kudwetshwe njengabantu abaphumelele kakhulu abaphumelela njalo. Lokhu kumabhayisikobho nasezincwadini nje, futhi cishe akunakwenzeka ukukuphindaphinda lokhu empilweni yangempela. Okuyiqiniso ukuthi izibali zamakhadi zizobamba onqenqemeni oluncane phezu kwekhasino, kepha akusho ukuthi ikhasino abazoyinqoba njalo.
Inani lamadeski asetshenzisiwe ngeke libe nomthelela kusu lokubala ikhadi. Inqobo nje uma umdlali efakwe amakhono futhi akwazi ukulandelela amanani wokuhlanganisa namanani okususa, khona-ke kulula kuye ukubala amakhadi.
Kungani kufanele unake ukubalwa kwamakhadi njengecebo? Yebo, uma uzimisele ngomdlalo, kufanele ulicabangisise kahle leli su.
Njengendlela yokubuyekeza, udinga ukukhumbula amaphuzu ambalwa ngokubalwa kwamakhadi:
Kukhona ezinye izinganekwane nemibono eyiphutha ngokubalwa kwamakhadi, futhi kungcono ukuthi wazi lokhu
Ukubalwa kwamakhadi isu elihloliwe nelivunyelwe kunoma iyiphi indawo yokudlala
Ukubalwa kwamakhadi kungasebenzela zonke izinhlobo zabadlali abanama-bankroll ahlukene, futhi kungasebenzela abadlali abanolwazi olusebenzayo lwezibalo
Ngenkathi ukubalwa kwamakhadi kunika abadlali umngcele, akusho ukuthi abadlali bazowina njalo uma bedlala
Amanye amakhasino angahle aswine okokubala kwamakhadi ngakho-ke kuyingozi eyodwa abadlali okufanele bazimisele ukuyithatha.
Enye indlela yokuqonda ukubalwa kwamakhadi ukusebenzisa i-fishbowl enezimabula njengesibonelo. Ithi une-fishbowl enamabhola amnyama ayi-100 namabhola amnyama ayi-100. Manje, ungalungiselela inani lokubheja olifunayo, futhi uzokhetha ngezikhathi ezithile ibhola ebholeni lenhlanzi.
Ake sithi usethe ukubheja kwakho futhi usukulungele ukukhetha ikhadi lokuqala. Ngakho-ke uvala amehlo akho bese ufaka isandla sakho ngaphakathi kwesitsha bese ukhetha esisodwa. Yiziphi izingqinamba zokuthi uzothola ibhola elimnyama? Vele, unethuba elingamaphesenti angama-50-50 lokuthola elimnyama njengoba i-fishbowl inenani elifanayo lamabhola amhlophe namnyama.
Ithi ukhethe ibhola elimnyama ekuzameni kwakho kokuqala, futhi ufuna ukulivivinya okwesibili. Ubeka ukubheja futhi ngethemba lokuthi ungakhulisa ama-winnings akho. Uma ukhetha lokho, ucabanga ukuthi yiziphi izingqinamba zokuthola elinye ibhola elimnyama? Ngakho-ke uthi unezingqinamba ezingama-50-50 wazi ukuthi kunenani elilinganayo lamabhola amhlophe namnyama?
Uma ucabanga ukuthi unamathuba afanayo wokukhetha ibhola elimnyama, ngabe wenza iphutha. Khumbula ukuthi ekukhetheni kokuqala, usuvele unebhola elimnyama, ngaleyo ndlela wehlisa inani lalo laba ngu-99 uma kuqhathaniswa namabhola amhlophe ayi-100.
Ngamafuphi, ekukhetheni kwakho kwesibili, kunethuba elingcono (yize lincane kakhulu) lokuthola umhlophe uma kuqhathaniswa nomnyama. Manje, lena inkolelo efanayo elawula umdlalo we-blackjack.
Ake sithi ubamba iqhaza emdlalweni we-blackjack one-deck enabanye abadlali ababili, futhi phakathi nomzuliswano wokuqala, kudlalwe ngawo wonke ama-Aces amane etafuleni. Ucabanga ukuthi liyini ithuba lakho lokuthola i-blackjack emzuliswaneni wesibili? Uzimisele ukubheja malini?
Njengoba wonke ama-Aces athathwe emzuliswaneni wokuqala, khona-ke ithuba lakho lokuthola i-blackjack emzuliswaneni wesibili lilingana no-0. Futhi uma ungumdlali okhaliphile, uzobheja kuphela inani eliphansi emzuliswaneni wesibili. Manje, uma kungekho ama-Aces akhethiwe futhi adlalwa ngesikhathi sokuqala, ngakho-ke kunengqondo ukuthi ubheja inani elikhulu emzuliswaneni wesibili.
Lokhu kusho ukuthi izingqinamba ozohlangabezana nazo ku-blackjack azifani kuyo yonke imijikelezo. Izimo zizoshintsha ngokuya ngamakhadi adwetshiwe futhi adlalwe kumaround angaphambilini. Ukufingqa, udinga ukunaka izinto ezilandelayo ezihlobene nokubalwa kwamakhadi:
I-Blackjack njengomdlalo wamakhadi iyinqubo yemidlalo yekhadi yenqubo ethembekile-yokulingwa.
Ukususwa kwamakhadi enani eliphansi, kusuka ku-2 kuye ku-6, kungaba nomthelela omuhle kulokho okulindelwe ngumdlali.
Ukususwa kwamakhadi enani eliphezulu, njengama-10s ne-Aces kuzoba nomthelela omubi kulokho okulindelwe ngumdlali.
Ukususwa kwamakhadi athile kuzoba nomthelela omkhulu kulokho okulindelwe kunokususwa kwamanye.
Ukuze isu lokubala amakhadi lisebenze kahle, kubalulekile ukuthi likhombise amandla ahlukahlukene wamakhadi njengoba ekhishwa emphemeni.
Njengoba sekushiwo, ukususwa kwamakhadi athile emphemeni kuzoba nomthelela kulokho okulindelwe ngumdlali. Isibonelo, amakhadi kusuka ku-2 kuye ku-6 azoba nomphumela omuhle, namakhadi obuso azoba nomthelela omubi kulokho okulindelwe abadlali.
Njengomdlali, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kungani ukususwa kwamakhadi amancane kuzoba kuhle, nokuthi kungani amakhadi amakhulu athathwe emphemeni kubhekwa njengokubi. Ngokukhumbula amasu ayisisekelo ku-blackjack nemithetho yasendlini ebekwe yikhasino, ungamisa iziphetho ezilandelayo:
Izinkokhelo zeBlackjack zizohlomulisa abadlali. Uma ideski lisenamakhadi ambalwa wenani eliphezulu, khona-ke kunethuba elikhulu lokuthi ungaqoqa i-blackjack enenzuzo yakho. Ngisho noma umdlali nomthengisi benethuba elifanayo lokushaya i-jackpot, umdlali usenomkhawulo njengoba i-blackjack yakhe ikhokhelwa ngebhonasi ekhokhelwa u-3 kuye ku-2 ngenkathi i-blackjack yomthengisi ikhokhelwa kuphela noma kunjalo, yithi 1-1 .
Lapho uthatha isinqumo sokuphinda kabili phansi, unethemba lekhadi elikhulu . Uma uphinda kabili ku-hard 9 kuye ku-11 usebenzisa isu eliyisisekelo, unethemba lokuthi uzothola ikhadi elikhulu. Futhi, ukuphindwa kabili kuvame ukwenzeka uma ikhadi eliphezulu lomthengisi libuthakathaka. Lokhu kusho ukuthi umthengisi unethuba eliphakeme lokugcwala ngekhadi lakhe elibuthakathaka, futhi amakhadi amakhulu asele emphemeni.
Ukwehlukanisa kuyanconywa uma ideski lisenamakhadi amakhulu. Ukuhlukanisa kuhle kakhulu kumdlali uma ideski lisenamakhadi amakhulu amakhulu afana no-10 no-Aces. Lokhu kuyiqiniso uma uhlela ukuhlukanisa ama-Aces, ama-7, ama-8, nama-9.
Ukudlala ukubheja komshuwalense kungasiza umdlali . Usebenzisa amasu ajwayelekile, umshwalense awukona ukubheja okunconywayo, futhi lokhu akufanele kwenziwe. Kepha uma wazi ukwakheka kwamakhadi asele, lolu hlobo lokubheja lungakusiza. Ukubheja kumshuwalense kuzuzisa kakhulu uma ucabanga ukuthi emphemeni usaqukethe ama-10s.
Imithetho yekhasino ithi umthengisi uzoshaya ku-16 noma ngaphansi bese ema ku-17 kuye ku-21. Uma ideski lisenamakhadi amakhulu, umthengisi unethuba eliphakeme lokuqhuma lapho edweba amanani wezandla kusuka ku-12 kuye ku-16.
Lezi ngezinye zezizathu zokuthi ukuba khona kwamakhadi amancane kuzozuzisa umthengisi, futhi amakhadi amakhulu azozuzisa abadlali.
Ukuze uqonde ukubalwa kwamakhadi, kubalulekile ukuthi wazi nomgomo wawo oyisisekelo. Ngemuva kokushintshwa kwamakhadi, ungalindela ukuthi ipaki lamakhadi lizoba nenani elilinganayo lamakhadi amakhulu namancane. Lapho nje umdlalo uqala, ukwakheka kwedeski kuzoshintsha.
Manje, uma ukwazi ukulandelela ukususwa kwamakhadi amancane namakhulu, uzoba nombono wokuthi yini ebusa emphemeni. Uma ideski ligcwele amakhadi amakhulu, isidlali esisebenzisa ukubalwa kwamakhadi sizoba nomphetho, futhi singabheja ngaphezulu.
Uma emphemeni iphethwe amakhadi amancane, esiphikisayo ikhadi kusimo, futhi udinga ukubheja encane. Ngamafuphi, ukubalwa kwamakhadi kuklanyelwe ukusiza abadlali ukuthi babone ukuthi banomphetho kumjikelezo othile lapho bedlala i-blackjack.
Kunezinhlelo ezithile ezitholakalayo namuhla, kodwa eyokuqala idinga ukusetshenziswa kwamathegi ekhadini ngalinye. Olunye uhlelo oludumile lubizwa nge-Hi-Lo, futhi lunikeza okulandelayo:
Umaki wenani le- + 1 unikezwa wonke amakhadi amancane abekwe ezingeni 2, 3, 4, 5 no-6. Lokhu kukhombisa ukuthi ukususwa kwekhadi ngalinye emphemeni kuzoba nomthelela omuhle kulokho okulindelwe abadlali.
Kusetshenziswa lesi simiso, amakhadi amakhulu noma wenani eliphakeme njengama-10s ne-Aces anikezwa inani le -1 ngoba ukususwa kwala makhadi ngeke kumsize umdlali.
Njengoba ukususwa kwama-7s kuye kwangu-9 kuzoba nomthelela omncane kulindelo uma kuqhathaniswa namanye amakhadi, inani elinikezwe la makhadi lingu-0.
Ngemuva kokunikeza amanani ahlukile kumakhadi, izibali zizobe sezengeza amanani okuthola isamba sezibalo noma esaziwa kwimibuthano yekhasino njengokubala okusebenzayo. Ukubalwa kokugijima emzuliswaneni wokuqala kuzodluliselwa emzuliswaneni olandelayo ngenkathi kuqashelwa isimo sesibalo ekugcineni komjikelezo ngamunye. Kusho ukuthini uma ngemuva komzuliswano wokuqala isibalo esisebenzayo silungile?
Ukuthola inombolo evumayo, kusho kuphela ukuthi amakhadi amancane adlalwe ngaphezu kwamakhadi amakhulu. Lokhu kusho ukuthi amakhadi angabekiwe azofaka amakhadi amakhulu kakhulu uma kuqhathaniswa namakhadi amancane.
Nasi isifinyezo samaphoyinti abaluleke kakhulu njengoba kuxoxiwe:
Uma ukubala okusebenzayo kukuhle, kusho ukuthi indawo yokuhlala yamakhadi angasetshenzisiwe isabuswa ngamakhadi amakhulu, ikunikeze inzuzo.
Uma ukubalwa kokusebenza kungekuhle, kusho ukuthi indawo yokuhlala yamakhadi angasetshenzisiwe ilawulwa ngamakhadi amancane azobeka abadlali engcupheni.
Uma isibalo esisebenzayo singu-0, kusho kuphela ukuthi ideski inenani elilinganayo elincane nelikhulu
Ngokusebenzisa inqubo yokubala amakhadi, izinto zokubala amakhadi zizoba nombono wokuthi isilinganiso samakhadi amancane sikhulu kangakanani emzuliswaneni olandelayo.
Izibali azikhumbuli ngekhanda wonke amakhadi abhekwe kulo mdlalo. Abakwenzayo kunalokho ukufaka inani le- + 1 noma i – 1 ukubonisa umphumela walo kulokho okulindelwe ngumdlali. Ngokubala okugijimayo engqondweni, okokubala kwamakhadi nabadlali abanolwazi bangahluka kubhejwa kwabo esandleni sabo esilandelayo. Nazi izibonelo zokuthi abadlali bazomisa kanjani ukubheja kwabo ngokususelwa kunani eligijimayo:
Uma ukubala okusebenzayo kukuhle, abadlali bazokhulisa usayizi wabo wokubheja.
Bazonciphisa ukubheja kwabo ngakolunye uhlangothi uma isibalo sokugijima singekho.
Uma unaka isu, uzothola ukuthi izinto zokubala zamakhadi zizolahlekelwa izandla eziningi kule nqubo, kepha zizophumelela ngaphezu kwalokho ezilahlekile ekuhambeni okude. Isizathu salokhu ukuthi imvamisa banokubheja okuningi ezandleni lapho bewina uma kuqhathaniswa nemali ababheja ngayo lapho belahlekelwa.
Yize umthengisi ezophinde abe nethuba elifanayo lokuthola amakhadi amakhulu kusuka emphemeni, okuhle ngabadlali ukuthi bangenza izinto eziningi etafuleni, njengokuhlukanisa noma ukuphinda kabili, futhi bakhokhelwa u-3 kuye ku-2 ku-blackjack. Zonke lezi zinto zizosiza umdlali ukuthi athole inzuzo lapho edlala i-blackjack.
Ezinye izinhlelo zokubala amakhadi ziyatholakala ku-inthanethi, futhi uhlobo ngalunye luza nobunzima obuhlukahlukene. Enye yezinguqulo ezaziwa kakhulu yi-Hi-Lo evumela abadlali ukuthi babeke inani lamakhadi, ukubeka +1 kwamakhadi amancane kanye no -1 wamakhadi amakhulu.
Manje, ukusetshenziswa kwale ndlela yokubalwa kwamakhadi kunemikhawulo yayo ngoba yehluleka ukuthola izinguquko zenani ngokunembile. Isibonelo, ukususwa kwamakhadi amancane kusuka ku-2 kuye ku-6 kuzoba nemiphumela ehlukile emphemeni.
Isibonelo, ukususwa kwe-5 kuzoba nomphumela omuhle wokususa kune-2. Lesi yisona sizathu esenza ezinye izinhlelo zokubalwa kwamakhadi ezitholakalayo namuhla zizame ukucacisa kakhulu uma kukhulunywa ngokwabela amanani.
Kwabanye abadlali, abazokwenza ukunikeza inani elingu- +2 ukukhombisa ukuthi ikhadi linomphumela omkhulu wokususa kanye nokubeka +1 kwelinye ikhadi elincane elinomphumela omncane. Uzothola nezinhlelo zokubala ikhadi ezinikezela inani le- +3 noma -3.
Konke lokhu kuzosebenzela abadlali abanesipiliyoni abafuna ukuqonda ubuciko bokubala amakhadi. Kepha kwabaqalayo abanjengawe, kungcono ukuqala ngeleveli 1 noma ngohlelo lwe-Hi-Lo ngoba lulula.
Ngokufingqa, kufanele ukwazi ukunaka izici ezibalulekile zezinhlelo zokubala ikhadi. Nazi ezinye izici ezibalulekile namaphuzu maqondana naleli su:
Ekubalweni kwamakhadi, umdlali uzokwabela amathegi noma amanani kumakhadi ngokuvumelana nomphumela wawo wokususwa kwekhadi.
Ukususwa kwamakhadi amancane emphemeni kuyazuzisa kumdlali, ngakho-ke lawa makhadi anikezwa amanani amahle.
Ukususwa kwamakhadi amakhulu emphemeni kuzoba yingozi kubadlali, ngakho-ke lawa makhadi anikezwa amanani amabi.
Abadlali bazokwengeza amanani ngokwengqondo ngemuva komjikelezo ngamunye ukuze bathole inani eligijimayo ngemuva komjikelezo ngamunye.
Ukubalwa kokugijima komzuliswano wokuqala kuzodluliselwa emzuliswaneni olandelayo.
Lapho ukubalwa kokugijima sekuvele kukuhle, lokhu kuyinkomba yokuthi unqenqemeni futhi angakhuphula ukubheja kwakhe emzuliswaneni olandelayo.
Lapho inani eligijimayo linegethivu, lokhu kuzobonakala njengesimo esingesihle kumdlali. Ngakho-ke uzobheja amancane emzuliswaneni olandelayo.
Ukubalwa okuhle kuyasiza kubadlali ngoba bazothola ithuba eliphakeme lokuthola ama-blackjacks, futhi bazophumelela kakhulu uma bethatha isinqumo sokuhlukanisa noma ukuphinda kabili.
Uhlobo oludumile lwesistimu yokubalwa kwamakhadi uhlelo lwe-Hi-Lo oludinga ukwabiwa kuka +1 noma -1 kumakhadi asebenziswa etafuleni.
Ileveli 2 yohlelo lokubala ikhadi inikezela inani elingu- + 2 kanye no–2.
Ileveli 3 yohlelo lokubala amakhadi inikezela inani elingu- +3 kanye no -3, futhi lokhu kuthathwa njengokuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kugcinelwe abadlali abanolwazi.
KwakunguHarvey Dubner owaqala ukuxoxa kabanzi ngohlelo lwe-Hi-Lo ngo-1963. Ngenkathi zazikhona ezinye izinhlelo ezazikhona ezibandakanya naleyo eyayithandwa nguDkt Edward Thorp, uhlelo olwethulwa nguDubner lwalungelula ukuxakaniseka futhi kulula ukuluqonda. Ngenxa yobulula bayo, uhlelo lwe-Hi-Lo belusetshenziswa ngabadlali abaningi be-blackjack isikhathi eside futhi lusathandwa kuze kube yilolu suku.
Njengoba kushiwo, kuzodingeka unikeze amanani +1, -1 noma 0 kumakhadi njengoba kubhekwana nawo etafuleni. Amakhadi aphansi azonikezwa inani le- + 1, futhi amakhadi aphakeme afana no-10 azonikezwa -1. Inani elingathathi hlangothi le-0 linikezwa i-7 kuye ku-9.
Uma ufuna ukwazi kahle ubuciko bokubala leli khadi, kufanele wazi ukuthi ungabona kanjani inani lekhadi ngalinye kalula. Udinga ukuzijwayeza okuningi ukuze kuzoba lula kuwe ukwaba amanani njengoba ephuma emphemeni.
Njengendlela yokuzijwayeza, ungathatha ipaki lamakhadi ashubile ulithathe ngalinye ngesikhathi, unikeze inani lazo zonke izinyathelo zendlela. Njengoba ikhadi ngalinye liphathwa, kufanele ukwazi ukwabela inani kulo. Qhubeka wenze le nqubo kuze kube yilapho kungokwemvelo ukuthi unikeze amanani.
Lapho usubazi kahle ubuciko bokunikeza amanani, isinyathelo esilandelayo okufanele usenze ukuthola ingqikithi esebenzayo.
Ake sithi amakhadi asebenzisiwe yilena alandelayo: 2, 6, 8, 3, A kanye noJ. Ngokusebenzisa izisekelo zokubalwa kwamakhadi, bekufanele unikeze omaki abalandelayo: +1, +1, 0, +1, -1 and -1.
Usebenzisa lolu chungechunge, inani eligijimayo kufanele libe: +1, +2, +2, +3, +2 kanye ne +1. Lokhu kusho ukuthi ekugcineni kwalo mjikelezo, isibalo esisebenzayo sikwi- + 1.
Vele, kumdlalo wangempela, wena uchungechunge luzoba lude. Kepha uma kukhulunywa ngenqubo yokubalwa kwamakhadi, ungaqala ngokubala amakhadi ambalwa ngasikhathi kuze kube yilapho ukhululekile ngenqubo.
Umqondo lapha ukwenza ngaphambi kokuzama ukusebenzisa isu etafuleni. Uma uqhuba ubuciko bokubala amakhadi, kufanele ukwazi ukugxila ekunemba nasejubaneni. Ukunemba kwakho nejubane lakho kungakusiza ukuthi ufunde hhayi nje ubuciko bokubala, kepha kuzokunikeza imininingwane efanele etafuleni lapho uyidinga kakhulu.
Olunye uhlobo lokubhola okufanele ujwayelane nalo yi-‘khadi lokukhansela ikhadi ‘. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha indawo yamakhadi bese uvula amakhadi amabili ngasikhathi sinye. Uma ikhadi lokuqala liphansi (+1) futhi ikhadi lesibili liphakeme (-1), kusho ukuthi bazokhanselana kuphela, ngaleyo ndlela kungashiyi mthelela ekubalweni kwakho kokugijima. Lokhu kusho ukuthi uma nikwazi ukukhansela omunye nomunye, ukubala kuzoba lula kakhulu kuwe.
Kuthiwani uma kubhangqa elilandelayo uthola amanani we -2 no +4? Noma mhlawumbe u- +2 no -4? Sizoba yini isamba sokugijima kubhangqa ngalinye Uma unesimo sokuqala, ukukhanselwa kuzoholela enanini le- +2 bese kuthi owesibili aholele ku-2.
Lezi zibonelo zingabonakala zinzima futhi ziyinkimbinkimbi, kepha uma uzijwayeza lokhu okuningi, ungakhansela kalula amanye amakhadi ngaleyo ndlela ikuvumela ukuthi wenze inani eligijimayo ngendlela esheshayo nelula.
Ngakho-ke ukufaka kanjani ukubala kwamakhadi lapho udlala umdlalo we-blackjack? Kulo mhlahlandlela, sizobe sigxile kumdlalo owodwa wedeski. Ukushintshanisa ukubheja kwakho kulo mdlalo kulula, kepha inselelo yabadlali ukuthola umdlalo we-single-deck oshaywayo. Kunezizathu ezimbili zokuthi kungani lamatafula enganqobeki:
Iningi lalawa amatafula lizonikela nge-blackjack engu-6-5 kuphela.
Abadlali bavame ukunikezwa kuze kube yimizuliswano emithathu ngaphambi kokuthi umthengisi azophinde agudle emphemeni.
Ngokusemandleni akho, kufanele uzame ukweqa amatafula akhokha u-6-5. Kusekhona amakhasino anikela ngo-3-2 we-blackjack, futhi inselelo ukuthola ukuthi ungadlala kuphi.
Inkinga elandelayo okufanele uyicabangele nenani lokuguqulwa okuhilelekile. Kuma-casino amaningi, umthengisi ulandela Umthetho 6. Ku-Rule of 6, kuzokwakhiwa kabusha izinguquko uma inani labadlali nenombolo yama-round ilingana nesithupha.
Uma itafula linabadlali abane, besebenzisa i-Rule of 6, umthengisi uzoxuba amakhadi ngemuva kwemijikelezo emibili. Uma kunabadlali abahlanu, kusho ukuthi umthengisi uzowasanganisa ngokushesha amakhadi ngemuva komzuliswano owodwa. Iphuzu lapha ukuthi emidlalweni eminingi yedeski elilodwa, ngeke ukwazi ukudlala imijikelezo eminingi ngoba umthengisi uyalelwe ukuthi ashibilikise ideski ngemuva kwesikhathi esithile.
Kukhona amanye amakhasino asebenzisa ukuhluka kwalo mthetho, umthetho we-7 nomthetho we-5. Umthetho we-7 ungcono kancane njengoba ukukunikeza amathuba amaningi wokudlala imizuliswano ethile, kanti i-Rule of 5 yimbi kakhulu.
Ake sithi uthole ‘itafula elishaywayo’, futhi uyaqinisekiswa ukuthi uzodlala okungenani imizuliswano emithathu ngaphambi koku-oda. Uzohlela kanjani ukubheja kwakho?
Masisebenzise lesi sibonelo ngokubala okulandelayo okulandelayo: +1 noma ngaphansi, +2, +3 no +4 noma ngaphezulu. Amayunithi angu-1, 2, 3 no-4.
Lesi sibonelo esingenhla sibonisa ukusakazwa kokubheja okungu-1-4 lapho ukubheja okuncane ongakwenza kuyunithi elilodwa lokubala okugijima kwe +1 noma ngaphansi, futhi njengoba isibalo sakho sikhula, uzokwandisa ukubheja ngeyunithi e-1.
Manje, lapho isibalo sokugijima siba sihle ngokwengeziwe, kuba ngcono inzuzo yakho, ngaleyo ndlela uzodinga ukubheja okuningi. Ungalungiselela futhi lokhu kubheja uma ufuna ukubheja okuningi, usebenzisa ukusakazwa kokubheja kwe- $ 10 kuye ku- $ 40, noma ku- $ 100 kuya ku- $ 400.
Kufanele uqaphele lapho ubeka ukubheja kwakho. Ukuphusha ukubheja kwakho kusuka ku- $ 10 kuye ku- $ 40 usuka kwesinye isandla uye kwesinye lapho u- $ 25 elahlekile phambilini akusona isinyathelo esihle nesingenziwa ngabadlali abaningi abanesipiliyoni.
Ngokwenzayo, abadlali abanesipiliyoni bazokwandisa ukubheja kwabo ngemuva kokuwina isandla. Noma isibalo sokusebenza manje sesifikile ku- +4, kwesinye isikhathi kungcono ukuthi uqaphele lapho unyusa ukubheja ukuze uzodlala ngaphansi kwe-radar futhi ikhasino ngeke likubuze noma likubheke. Into ebaluleke kakhulu lapha ukubheja kakhulu uma unenzuzo futhi ubheja kancane uma ungayithokozeli leyo nzuzo.
Uma udlala kumdlalo onezitezi ezimbili, siphakamisa ukuthi uye ekusakazeni kokubheja okungu-1-6. Lokhu ukusabalala okukhudlwana ngoba ikhasino lizofaka onqenqemeni oluncane futhi linxephezele lokho, abadlali nabo badinga ukusakaza ukubheja kwabo.
Futhi, kufanele uqaphele lapho udlala isu emidlalweni yedeski ephindwe kabili. Awudingi ukwenza ukugxuma okukhulu maqondana nokubheja ukuze ungadonsi amehlo omthengisi noma abaphathi bekhasino abaqaphela ukubala amakhadi wamakhadi.
Ngemuva kokumboza imithetho eyisisekelo yokubheja emidlalweni eyodwa neyesibili, udinga ukunaka lawa maphuzu abalulekile:
Abadlali kudingeka bakhethe amatafula lapho bafuna ukudlala khona, ikakhulukazi lawo ahlinzeka inkokhelo ka-3-2 ye-blackjack.
Udinga ukushintsha ukubheja kwakho ngokuya ngesibalo esisebenzayo.
Isibalo esisebenzayo kufanele sehluke emidlalweni eyodwa neyesibili yedeski.
Udinga ukubheja kakhulu uma isibalo esisebenzayo sikhuphuka futhi sinciphisa ukubheja uma sincipha.
Ungasebenzisa ukusakazwa kokubheja okungu-1-4 uma udlala kumidlalo yedeski elilodwa.
Emidlalweni edonsa kabili, udinga ukusebenzisa ukusakazwa kokubheja okungu-1-6.
Kungcono ukubheja ngokuqapha futhi ugweme ukwenza ukweqa okukhulu ekubhejeni ukugwema ukubonwa noma ukubuzwa abaphathi bekhasino.
Kubadlali abanesipiliyoni abafuna ukucacisa ukubalwa kwamakhadi abo nokubheja kwabo, abakwenzayo ukubala ukubala kwangempela. Nayi ifomula ejwayelekile ongayisebenzisa ukwenza i-True Count:
Ukubala / ukusebenzisa amakhadi asele emphemeni = Ukubalwa Kweqiniso
Uma unesibalo esisebenzayo se- + 6 futhi kunamakhadi ama-3 ngaphezulu emphemeni, i-TC ingu +2. Ngakho-ke uzolazi kanjani ikhadi elisele emphemeni? Awudingi ukuhlola idokodo eligcinwe ngumthengisi ngokomzimba. Okudingeka ukwenze ukuhlola ithreyi elahlayo evame ukubekwa ngakwesokunene somthengisi. Ungavele ubheke ithreyi ukulinganisa amakhadi asele emphemeni.
Lapho usuthole ukubalwa kweqiniso, manje usungakusebenzisa ukulungisa ukubheja kwakho, noma uma udinga ukusuka kude nesu lakho lokudlala. Ngemuva kokuqeda ukubheja nokudlala isandla, udinga ukubuyela ekubaleni okugijima okufanele kubuyekezwe ngaso sonke isikhathi.
Khumbula, udinga kuphela ukuguqula u-TC ngemizuzwana embalwa ngaphambi kokuqala komjikelezo ukunquma ukubheja ngqo. Kuzoba nezikhathi lapho i-TC izoba namaphoyinti wedesimali. Uma kunjalo, mane nje ukukusongele.
Ukubalwa kwamakhadi kungenye yamasu aphezulu asetshenziswa abadlali abanolwazi namuhla.
Yize kunezinsizakusebenza ezithile ngokubalwa kwamakhadi, kepha kukhona ezinye izinganekwane ezizungeze isu.
I-Blackjack iyinqubo yenqubo ethembekile yokulingwa.
Ukususwa kwamakhadi athile emphemeni kuzoba nomthelela omuhle noma ongemuhle kowomdlali
Ekubalweni kwamakhadi, umaki we- +1 unikezwa amakhadi anenani eliphansi, futhi -1 kumakhadi wenani elikhulu. Amakhadi kusuka ku-7 kuye ku-9 azothola ithegi 0.